हामी आत्मविश्वासी छौंः प्रमुख प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जन- खेलकुद - कान्तिपुर समाचार
भाद्र १८, २०७५ हिमेश
ढाका — पाकिस्तानले विरलै फुटबललाई महत्त्व दिन्छ, तर यही पाकिस्तानले नेपाललाई मैदानमा भने समय समयमा दु:ख भने दिन्छ । हालै सम्पन्न एसियाली खेलकुदतर्फ फुटबलको निहुँमा पाकिस्तानले लामो समयपछि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा फर्केको थियो ।
यो टिम नेपालकै समूहमा परेको थियो। लिग चरणमा अन्तिम खेल थियो र नेपालसामु पाकिस्तानलाई हराएर नकआउट चरण प्रवेश गर्ने ऐतिहासिक अवसर थियो, तर नेपाल त्यसमा नराम्रोसँग चुक्यो।
नेपाल त्यो खेलमा २–१ ले पराजित रह्यो। पाकिस्तान आफै पनि अगाडि बढ्न सकेन, तर उसले नेपाललाई एउटा पाठ भने सिकायो। साफ च्याम्पियनसिपका लागि भने विभिन्न खाले आन्तरिक विवादबीच पाकिस्तानले बल्लतल्ल टिम घोषणा गर्न सक्यो र यही टिमको उद्घाटन खेलमा नेपालले मंगलबार सामना गर्दैछ। बंगबन्धु रंगशालामा हुने खेलमा नेपालको रणनीति कस्तो हुँदो हो त? सतर्क? सावधान? होइन, नेपाल त्यस खेल जित्नेमा आत्मविश्वास छ।
यो आत्मविश्वास किन भन्दा टिमका प्रमुख प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनको दाबी छ, नेपाल प्रतियोगिताको उपाधिका लागि दावेदार नै हो र यो सफलतासम्म पुग्न पहिलो खडुकिलोका रूपमा रहेको छ, पाकिस्तान। अघिल्लो दिन ढाका आइपुगेको नेपाली टिम सोमबार अभ्यास सत्रमा राम्रै पसिना बगायो र त्यस अगाडि प्रशिक्षक महर्जनसँगै कप्तान विराज महर्जन प्रि–म्याच कन्फ्रेन्समा उपस्थिति भए। प्रशिक्षक महर्जनले त्यस अवसरमा भने, ‘हाम्रो पहिलो लक्ष्य नकआउट चरण पुग्ने, त्यसपछि उपाधि हात पार्ने।’
‘हामी बंगलादेशमा उपाधि जित्न आएका हौं,’ प्रशिक्षक महर्जनले दाबी दोहराए। यसका लागि उनले प्रस्तुत गरेको तर्क हो, ‘नेपाली टिम अहिले खुबै सन्तुलित छ र यसका लागि खेलाडीले पर्याप्त मिहिनेत पनि गरेका छन्।’ उनले टिमको संरचना कस्तो हुने हो र कसरी खेल्ने हो, त्यो खुलाउन चाहेनन, तर उनको संकेत थियो, नेपालले ४–२–२ मा खेल्नेछ र सम्भवत: नेपाली फुटबलको भविष्य मानिएका डिफेन्डर सुमन अर्यालले डेब्यु गर्ने छन्।
प्रशिक्षक महर्जनको भनाइ थियो, ‘टिममा एउटा नयाँ अनुहारका रूपमा सुमन छन्।’ उनले एसियाली खेलकुदमा पाकिस्तानविरुद्धको खेलबाट आफूहरू पाठ सिकेको पनि दाबी गरे। उनको तर्क थियो, त्यस खेलमा दुवैको यू–२३ टिम थियो। अहिले दुवैको पूरा टिम मैदानमा उत्रने छ। त्यसैले प्रदर्शनमा फरक पर्ने छ नै। ‘हामी अझ परिपक्व भएर मैदानमा उत्रने छौं। प्रतियोगिताको पहिलो खेल जहिले पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ र हामी यसमा आत्मविश्वासी भएर खेल्ने छौं।’
पाकिस्तानी फुटबल संघले भने जस्तै विवादबीच पनि प्रशिक्षकमा भने ब्राजिली एन्टोनियो नोगुरालाई भित्र्याएको छ। उनले टिमलाई खुबै मिहिनेत गराएका छन्। उनले पहिलो उद्देश्य थियो, खेलाडीलाई खेलमा अत्याधिक रूचि बढाउने र साफ च्याम्पियनसिप जस्तो प्रतियोगिताका लागि मानसिक रूपमा तयार पार्ने। उनको दाबी छ, आफू यसमा सफल भएका छन्। त्यही कारणले त हो, पाकिस्तानले एसियाली खेलकुदमा नेपाललाई हराउन सकेको।
पाकिस्तानले मैदानमा उतार्ने टिम लगभग उही हो, जुन जाकार्तामा पनि खेलेको थियो। प्रशिक्षक एन्टोनियाले भनेका छन्, ‘ढाकामा हाम्रा खेलाडीले अझ राम्रो प्रदर्शन गर्नेछन्। टिमको प्रदर्शनमा पक्कै सुधार आउने छ।’ यस्तोमा नेपालले यही प्रतिद्वन्द्वीको सामना गर्दा सतर्क हुनै पर्छ। साफ च्याम्पियनसिपकै इतिहासमा नेपालले दुई अवसरमा मात्र पहिलो खेल जित्न सफल रहेको छ। प्रतियोगिताको इतिहासमा टिकेर नेपालले सावधानीपूर्वक खेल्नु पर्नेमा दुई मत हुने छैन।
साफ च्याम्पियनसिपमा पाकिस्तानविरुद्ध नेपालको प्रदर्शन
४ १ २ १ ६–५
प्रकाशित : भाद्र १८, २०७५ २१:३२
याे पनि पढ्नुहोस् :विदेशमा रहेकालाई मताधिकार सम्भव : निर्वाचन आयोग